उडुस के हो उडुस ? उडुस भगाउने सुरक्षित तरिका
दिनभरको कुदाकुदबाट लखतरान परेर जब हामी राति झकाएका हुन्छौँ, उडुसले आफ्नो काम थालिहाल्छ । उडुसले हाम्रो निद्रा र मुड मात्रै खराब गरिदिँदैन, बिमिरा र चिलाइको उपहार पनि दिने पर्छ । त्यतिले नपुगेर एक प्रकारको गन्धबाट समेत टाउको दुखाइदिने गर्छ ।
उडुसको टोकाइले हाम्रो छालामा सेकेन्डरी संक्रमण पनि हुने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै धुलिखेल अस्पतालको छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्ण भन्छन्, ‘कसैकसैमा यो टोकाइले कडा एलर्जिक प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छ ।’ उडुसले टोक्दा हाम्रो शरिरमा छोड्ने गरेको र्‍यालमा पाइने प्रोटिनले गर्दा एलर्जिक प्रतिक्रिया हुन्छ । कहिलेकाहीँ उडुसको टोकाइलाई चिलाउने बिमिरा, डाबर, दादुरासमेत ठान्ने गरिन्छ ।
सन् १९५० मा डीडीटीको माध्यमले अमेरिकामा उडुसलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । यसपछि उडुसले विभिन्न विषादी, रसायन आदिप्रति प्रतिरोधी क्षमता हासिल गर्दै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै गयो । उडुस हामी आराम गर्ने ठाउँको ८–१० फिट भित्र हुने गर्छ । उडुस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिस र उसले उपयोग गर्ने समान, फर्निचर आदिका माधयमले सर्ने गरेको छ ।
उडुसले रगत चुस्दा आफ्नो शरीरमा धेरै प्रकारका मानवीय रोगको जीवाणु लिए पनि यसले स्वस्थ व्यक्तिमा रोग सारेको कुनै प्रमाणित केस नरहेको औंल्याउँदै डा. कर्ण भन्छन्, ‘यसको टोकाइले सामान्य रूपमा कुनै संक्रामक रोग नसर्ने भएकोले यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उडुसले रोग नसार्ने भएकैले यो समस्या जटिल रहे पनि सरकारी अनुसन्धान, नियन्त्रण आदिको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन ।
उडुसको टोकाइले हरेक व्यक्तिलाई फरकफरक प्रकारले प्रभावित पार्ने गरेको छ । उडुसले टोक्दा छालामा कुनै चिनो नदेखिने सक्छ वा सानो दाग हुन सक्छ वा कडा एलर्जिक प्रतिक्रियासमेत हुन सक्छ । उडुसलाई खतरनाक नमानिए पनि यसले धेरै टोक्दा टोकाइपछि हुन सक्ने एलर्जीसम्बन्धी प्रतिक्रियामा चिकित्सा सहयोग आवश्यक हुन सक्ने डा. कर्ण आैंल्याउँछन् ।
उडुसको जीवनकाल एक वर्ष जतिको हुन्छ । पोथी उडुसले आफ्नो जीवनकालमा दुई सयदेखि चार सयसम्म फुल पार्न सक्छ । उडुसले पाएसम्म मानिसकै रगत चुस्न रुचाउँछ । अन्य स्तनधारी पशुपक्षीलाई समेत टोक्न सक्छ । केही नखाई यो ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म बाँच्न सक्छ । उडुस मुख्य रूपमा राति सक्रिय हुन्छ । पोथी र भाले दुवै उडुसले हामीलाई राति नै टोक्ने गर्छन् ।
राति सुतेका बेला उडुसले टोकेको तत्कालै अनुभव हुन्न । त्यो किनभने, यसले टोक्दा ताका आफ्नो र्‍यालका माध्यमले एक प्रकारको लठयाउने रसायन हाम्रो छालामा पुर्‍याउँछ । यही रसायनको प्रभावले गर्दा उडुसले रगत तानिरहँदा पनि हामी थाहा पाउँदैनौं । उडुसलाई हाम्रो शरीरबाट रगत तानेर पेट भर्न ३ देखि १० मिनेटसम्म लाग्छ ।
उडुस नष्ट गर्ने विभिन्न तरिका भए पनि सुरक्षित खाले, रसायन वा विषादीको प्रयोग बेगर मार्ने उपाय अवलम्बन गर्नु मनासिब मानिन्छ । यो तरिका हानिरहित, सुरक्षित र प्रभावकारी मात्र हैन कम खर्चिलोसमेत छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका ‘ताप’ को उपयोग हो । गाउँघरतिर समेत हामीले यो तरिका जानी–नजानी प्रयोग गर्ने गरेका छौं ।
तातो पानीमा लुगाफाटा, तन्ना, सिरक/सिरानीका खोल आदि भकभक उमालेर धुने गर्दा उडुसको दुहुदुहाइ हुन्छ । योसँगै खाट, कुर्सी, टेबल लगायतका कापकापमा तातो पानी हाल्ने गर्नुपर्छ । धुन नमिल्ने लुगाहरू (डसना, सिरानी, सिरक) लाई चाहिँ कडा घाममा मजाले सुकाउनुपर्छ । कालो प्लास्टिकको थैलोमा लुगाफाटा राखेर चर्को घाममा केही घण्टा राख्दा पनि उडुसबाट उन्मुक्ति मिल्न सक्छ ।